पत्रकार महासङ्घ हुम्लाको साधारणसभा सम्पन्न - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / पत्रकार महासङ्घ हुम्लाको साधारणसभा सम्पन्न
पत्रकार महासङ्घ हुम्लाको साधारणसभा सम्पन्न
बुधबार, माघ २१, २०७७ , साइनो समाचारदाता
रासस / नेपाल पत्रकार महासङ्घ हुम्ला शाखाको पाँचौँ साधारणसभा मङ्गलबार सम्पन्न भएको छ । शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधु बस्नेत शाहीका अध्यक्षतामा भएको सो साधारणसभामा महासङ्घका केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी पुन र सामानुपातिक उपाध्यक्ष मिमसिंह नेपालीको उपस्थिति थियो । जयबहादुर रोकायाले हुम्ला शाखाको स्थापना गर्नुभएको थियो ।
सो अवसरमा खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले पत्रकारले सहीरूपमा कलम चलाउन नसके झन् विकृति मौलाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकार कसैको पनि पक्षमा नभई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष भएर कलम चलाउनुपर्छ । समाजमा ऐनाजस्तो पारदर्शी भएर रहन सक्नुपर्छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरीले समाज परिवर्तनका संवाहक पत्रकार भएका कारण जिम्मेवारीअनुसार कलम चनाउनुपर्ने बताउनुभयो । महासङ्घ सचिव पुनले पत्रकार आफ्नो पेशाप्रति लगाव र समाजप्रति उत्तरदायी हुनुका साथै कलमप्रति इमान्दर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहीले साङ्गठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सुरेश परियारले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । सभाले आफ्नो भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिदको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
३.मोरङको रतुवामाईमा १२ करोडको लगानिमा कृषी फर्म
४.विदेश जाँनका लागि नोबेलको पीसीआर रिपोर्टलाई सरकारी मान्यता
५.माक्स खै ? : पथरी जेसिस
८.🔳 नेपालमा बेरोजगारी समस्या र समाधानका उपायहरू :
माक्स खै ? : पथरी जेसिस
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा एक सय शैंयाको होल्डिङ सेन्टर तयार
२५ केजि चितलको मासु बरामत
केएमसी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क हुँने
रेफ्रि कुटिने देशको राजधानी भनेर चिनिएको मोरङमा फेरि रेफ्रि कुटिए (भिडियाे सहित)